स्थानीय चुनावका लागि आयोगले माग्यो झण्डै नौ अर्ब
स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।
स्थानीय चुनावका लागि एकीकृत समाजवादी सहित २९ दल दर्ता
आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित २९ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
स्थानीय चुनावका लागि ६ नयाँ पार्टी दर्ता
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि ६ वटा नयाँ पार्टी दर्ता भएका छन्।
निर्वाचन अधिकृतका लागि आयोगले माग्यो नाम स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको नाम मागेको छ।
स्थानीय चुनावका लागि आजबाट दल दर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आजबाट दल दर्ता गर्न शुरू गरेको छ।
स्थानीय चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।
कस्तो अवस्थामा सर्छ निर्वाचन? विश्वमा मानवीय जोखिम, दैवी प्रकोप र सङ्कटकालका कारण निर्वाचन स्थगनका अभ्यास रहे पनि नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिंदैन। राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा निर्वाचन सारिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको धज्जी उडाउनु हो।
स्थानीय चुनावमा एक करोड ७९ लाख मतदाता स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
स्थानीय चुनावबारे निर्वाचन आयोगले दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय चुनावबारे जानकारी दिन दैनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ।
स्थानीय चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग स्थानीय तहको चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ।
स्थानीय तहको चुनाव आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव आगामी ३० वैशाखमा हुने भएको छ।
स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने? जनताका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मात्रै होइन, संघीयतालाई संस्थागत गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै लग्नुपर्छ।
साँच्चैको सरकार, स्थानीय सरकार कोभिड-१९ महामारी होस् वा स्थानीयको प्राथमिकतामा परेको विद्यालय, सडक वा पुलपुलेसाको निर्माण, स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गत पाँच वर्षमा प्रमाणित भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र सुरक्षाबारे छलफल
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सोमबार गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ।
१४ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले १४ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले १७ मंसीरबाट मतदाता नामावली विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिंदै निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
शिवराज नगरपालिकालाई अशोक लेल्यान्डको दमकल हस्तान्तरण आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्स प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित अशोक लेल्यान्डले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकालाई दमकल हस्तान्तरण गरेको छ।
संक्रमितलाई बोकेर अस्पताल पुर्‍याउने गाउँपालिका अध्यक्ष खोटाङको दिप्रुङ चुइचम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई कोरोना संक्रमितलाई आफैं गाडी चलाएर अस्पताल मात्र लैजाँदैनन्, आवश्यक परे संक्रमितलाई गाडीसम्म पुर्‍याउन आफैं बोक्न पनि पछि हट्दैनन्।
कोरोना रोकथाममा उदाहरणीय काम गर्दै यी स्थानीय सरकार, संक्रमित खोज्दै पुग्छन् घरघर कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरसँग जुध्न अधिकांश स्थानीय सरकार निष्क्रिय देखिए पनि सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय तह भने संक्रमित पत्ता लगाउन घरघर पुग्ने गरेका छन्।
ललितपुर महानगरले शुरू गर्‍यो सचेतना अभियान ललितपुर महानगरपालिकाले शहरी सुन्दरता कायम गर्ने उद्देश्यसहित नगर सचेतना अभियान शुरू गरेको छ। सडक छेउमा राखिने पर्चा, पम्प्लेट र होडिङ बोर्डले शहरको सुन्दरतालाई कुरुप बनाएको भन्दै महानगरले त्यस्ता सामग्री टाँस्ने र झुण्ड्याउने काम नगर्न सचेतना अभियान शुरू गरेको हो।